Warshad Nidaamka Wareegga Iskeelka Xiinka Yar - Shiinaha Shiinaha Cabbirka Yaryar Ultrasonic Qalabka Wareegtada iyo Alaab-qeybiyeyaasha
20Khz qalabka kala-baxa ultrasonic
Tikniyoolajiyadda firidhinta Ultrasonic waxay ka gudubtaa dhibaatooyinka kala-soocidda dhaqameed ee ah in qaybaha firidhku aysan fiicnayn ku filan, dareeraha kala firidhsan yahay mid aan xasilloonayn, waana sahlan tahay in la daayo.
Qalabka kala-baxa Ultrasonic ee nanoparticles
Sanadihii la soo dhaafay, nanomaterials ayaa si ballaaran loogu isticmaalay warshado kala duwan si loo hagaajiyo waxqabadka qalabka. Tusaale ahaan, ku darista graphene batteriga lithium wuxuu si weyn u dheereyn karaa nolosha adeegga batteriga, iyo ku darista silikon oksaydhka galaaska waxay kordhin kartaa daahfurnaanta iyo adkeynta muraayada. Si loo helo nanoparticles aad u fiican, hab wax ku ool ah ayaa loo baahan yahay. Uv-Ultrasonic cavitation isla markiiba wuxuu sameeyaa xalka cadaadis sare iyo cadaadis hoose oo aan tiro lahayn. Kuwani ...